ယူရို ၆၀ အောက်မကျသော HE ဖြင့် Mango မှ HE ဆောင်း ဦး ရာသီ ၉ ခုသည် စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
HE Mango မှဆောင်း ဦး ရာသီ ၉ ခုသည်ယူရို ၆၀ အောက်သာရှိသည်
လူးကပ်စ garcia | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ပုံ
ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ကနွေရာသီရောင်းအားကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဆောင်း ဦး ရာသီ "bargains" ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီများကိုစတင်တပ်ဆင်ကြသည်။ ဤသည်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ယခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်စတင်ခဲ့သည့် HE by Mango ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးသင်၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ရောင်းနေသောယူရို ၅၀ ထက်မနည်းသောအခြေခံလိုအပ်ချက် ၉ ခု သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်၌ရှိသကဲ့သို့။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတာသင်သိချင်ပါသလား။
1 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထည် Field ဂျာကင်အင်္ကျီ
2 Tricot လည်စည်း
3 အဝတ်လျှော်ဝါဂွမ်း blazer
5 ကင်းဗတ်အတွက် Weekend အိတ်
9 ပါးလွှာသော fit chinos
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထည် Field ဂျာကင်အင်္ကျီ
အဲဒါမုဆိုးမပါပဲ မိုးရာသီအတွက်စုံလင်သည်။ ဤလယ်ပြင်ဂျာကင်အင်္ကျီသည်နည်းပညာမြင့်မား။ ရေစိုခံထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသားရေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးသားရေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကော်လာနှင့်ကော်ဖီများအပေါ်တွင်ညှပ်ထားသည်။ ၎င်းကို polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလည်ပင်းတွင်လည်ပင်းနှင့်ဖုံးထားသည်။ ရှေ့တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ဇစ်နှင့်ခလုတ်ကိုခလုတ်၊ ခလုတ်အိတ်လေးခုနှင့်ခလုတ်ခလုတ်များပါသည့်ရှည်လျားသောလက်ရှည်များရှိသည်။ ရောင်းရန် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ အားဖြင့် 49,99 €.
၎င်းသည် Mango မှ HE ၏ရဲရဲရင့်ရင့်အဆိုပြုချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စတုရန်း finish ကိုအတူစနစ်တကျ tricot လည်စည်းအနက်ရောင်၊ အပြာသို့မဟုတ်ကြက်သွေးရောင်သုံးရောင်ရနိုင်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းအတွက်€ 19,90 Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ဒါဟာပန်းပဲဆရာပေါ့ပေါ့လိုင်းပိုင်။ ရေတပ်သို့မဟုတ် tan အရောင်၌တည်၏၎င်းသည်ရှေ့ပိုင်းတွင်ခလုတ်တစ်ခုပိတ်ထားသည်၊ ထစ်ထိုးကြိုးများ၊ ရင်ဘတ်ပေါ်ရှိအိတ်ကပ်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ခတ်အိတ်ဆောင်နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏ cuffs ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ကျောဖွင့်ထားသည်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၄၉.၉၀ ဖြစ်ပါသည် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
အ ဂျင်နီရှပ်အင်္ကျီများသည်ယခုနှစ်ကျဆုံးခြင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်, နှင့်သူ Mango မှ HE, သူတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်ထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မနိုင်။ ဤသည် Mango ၏ပေါ့ပေါ့လန်းဖြစ်သော Blacksmith နှင့်လည်းဆိုင်သောရှပ်အင်္ကျီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရှေ့နှင့် cuffs နှစ်ခုလုံးတွင် snap button ကိုပိတ်ထားသည်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၃၉.၉၉ ဖြစ်ပါသည် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ကင်းဗတ်အတွက် Weekend အိတ်
ဒီနှင့်အတူ ဘာမှမပျောက်ဘဲတနင်္ဂနွေကိုသုံးရန်အကောင်းဆုံးအရွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ ရေချိုးနိုင်ပြီး၊ ပတ္တူနှင့်သားရေ - အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်လက်ကိုင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်၊ တိုတောင်းပြီးတစ်ခုနှင့်ရှည်လျားသောဖြုတ်တပ်နိုင်သောလက်ကိုင်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ တံခါးပိတ်အိတ်နှစ်လုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းတစ်ခုပါရှိသည်။ သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကတော့ယူရို ၄၉.၉၉ ပါ Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ဘယ်သူ့မှာသူတို့အဝတ်အစားမှာချည်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီမရှိဘူးလဲ။ ၎င်းသည်အလွန်စွယ်စုံသောအ ၀ တ်အထည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ တ်စုံ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အပြာရောင် colorway တစ်ခုတွင်၎င်းသည် buttoned collar၊ ရှေ့ကို ဖြတ်၍ ခလုတ်၊ ရင်ဘတ်ပေါ်၌အိတ်ကပ်၊ ရှည်သောအင်္ကျီလက်နှင့် coliseum cuff နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၃၉.၉၉ ဖြစ်ပါသည် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ecru အရောင်သည်ယခု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဆိုပါပါးလွှာသောဂျင်းဘောင်းဘီများသည်အိတ်ကပ်ငါးခုပါရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီဖြင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီးအိတ်ကပ်ငါးလုံးပါ ၀ င်သည်။ စျေးနှုန်းက Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
အရောင်လေးမျိုးဖြင့် ရေတပ်, ချောကလက်, သားရေသို့မဟုတ် Khaki, သူသည် Mango ၏ယက္ကန်းသမားသစ်များမှဤသည်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အဏ္ဏဝါဆုံးအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသားရေလေးနှင့်လွယ်ကူသောရာဘာဖိနပ်တို့ဖြင့်လာသည်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၅၉.၉၉ ဖြစ်ပါသည် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ပါးလွှာသော fit chinos
ဒီ pပါးလွှာသောဝါဂွမ်း Chinos များကိုအရောင် ၇ မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, ဒါကြောင့်သင်ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့မှာဘေးအိတ်ကပ်နှစ်ခုရှိပြီးနောက်နှစ်ခုမှာ welt နှင့် button တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၃၉.၉၉ ဖြစ်ပါသည် Mango အွန်လိုင်းစတိုးမှသူ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » HE Mango မှဆောင်း ဦး ရာသီ ၉ ခုသည်ယူရို ၆၀ အောက်သာရှိသည်
မက်ဒရစ်ရှိအကောင်းဆုံးမိုဂျီတိုတို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ "ထိပ်တန်း 5"